Misa Kushambadzira Kusiyanisa Kusarudzika | Martech Zone
Kana iwe wanga uri muverengi webasa rangu, iwe unoziva kuti ini ndiri anopikisa iyo ne fananidzo mukushambadzira. Kazhinji, sezvazviri pakuita zvemunhu, kwete sarudzo yemaitiro ekushandisa, asi nguva yekushandisa zano rega rega. Iko kune kumwe kusanzwisisika mune izvo izvo infographic kushambadzira kukuru… Asi inosundira kuvandudzwa kwemunhu. Ose ari maviri anoshanda nemazvo kana iwo achinge ashandisa nemazvo.
Pane imwe nguva, kushambadzira kwese kwaive kwega. Mutengesi wepasuo nesuo, mutengesi webhangi, uye haberdasher vese vaiziva vatengi vavo nemazita. Zvakananga tsamba zvimedu zvakadhindwa mumhando dzakasiyana kukwidza kune yevatengi geography kana zvavanofarira. Zvino, nemambakwedza eemail nemawebhusaiti, vashambadzi vakatanga kuvimba nemasaisa-kushambadzira matekinoroji kuendesa imwechete meseji munzira nyowani dzedigital. Kubva kuMonetate's Infographic Misa Kushambadzira Kukwikwidza Kuita Kwemunhu
Tarisa uone izvi infographic uye uve shuwa kurodha pasi ebook raMonetate, Iyo Chokwadi chePamhepo Kuita munhu. Yakagadzirwa mukubatana neEconsultancy, yavo yega yekutsvaga inotsvaga izvo zviri kutyaira online online, matekiniki nemhando dzedata dziri kushandiswa kugadzirisa ruzivo rwevatengi rwepamhepo uye zvipingaidzo pakubudirira.
Tags: kushambadzira kukurukuita marionline pamunhuPersonalization
May 8, 2013 pa 5: 47 PM
Kana makambani achishandisa vezvenhau, kusarudzika kunofanirwa kuve kwakanyanya kukoshesa. Zvemagariro midhiya ndezve kubatanidzwa uye munhu kumunhu kusangana. Kana makambani akasayedza kusangana nemutengi, ipapo vanozovarasa.